Isixhobo soMbane soMbane soMbane soMbane kunye noMvelisi | SONGZ
I-JLE Series, ye-10-12m ibhasi yesibini, eyenziwe ngokwezifiso
Ukucaciswa kobuchwephesha boMbane oMbane oMbane oMbane u-A / C JLE:
48 kW okanye 163776 Btu / h
42 kW okanye 143304 Btu / h
Ukusetyenziswa kwaMandla okuPhola
Ukusetyenziswa kwaMandla e-PTC
1. Ifriji ngama-R407C.
2. Icandelo lomoya opholileyo lifakwe ngaphezu kwenjini engasemva, kwaye kufuneka liqwalaselwe ukuba lifakelwe ukuba lityhalelwe lonke, lize likhutshelwe ngaphandle ukuze kulungiswe ngokutsha. Umbhobho womoya wonxibelelwano lwenguqu phakathi kweyunithi kunye nombhobho womoya emotweni kufuneka ubekwe ngokulula.
3. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba umoya ovuthelayo wokungena uyangena kwaye ukhuphe umoya ngaphandle kwamagingxi-gingxi, nokuba umoya owuthathayo kunye nowokukhupha unqunyulwe ngokufanelekileyo ngaphandle komoya kunye nesekethe emfutshane. Isantya somoya secala lesithuthi kufuneka sibe≤5m / s.
4. Umbhobho womoya wothungelwano lotshintsho ukusuka kwiyunithi yomoya ukuya kwindlwana yomoya ebhasini inemilo ekhethekileyo, ke uyilo kufuneka luqwalasele ngokupheleleyo ukusebenza kofakelo kunye nokunciphisa ukumelana nombhobho womoya. Isantya somoya sendlela yenguqu kufuneka sibe≤I-12m / s.
6. Iindibano zolawulo lombane ezifana neebhokisi zolawulo zombane kunye nee-inverters zihlala kwindawo ethile kwisithuthi, kwaye kufuneka ziqwalaselwe kwindawo engenisa umoya kwaye engenawo manzi.
7. I-JLE-IIIB-T ibuyiselwe umva (impompo yobushushu kunye ne-PTC) umsebenzi odibeneyo wokulawulwa kobushushu bebhetri.
8. Nceda unxibelelane nathi ku sales@shsongz.cn ngezinye iinketho kunye neenkcukacha.
Ukuchazwa okuPhezulu kwezoBuchwephesha kwi-SZB Series ye-air Conditioner
1. Isakhelo sesakhelo esipheleleyo, esidityaniswe neqokobhe lealuminium alloy, sikhulu ngobukhulu kunye nobunzima bokukhanya.
2. Itekhnoloji yokuguqula amaza eguqukayo iyayiqonda imeko yesantya esiguqukayo seekhomputha kunye nabalandeli, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
3. Uphuhliso oluqhelekileyo, uyilo lweemodyuli, ubunzima bokukhanya.
4. DC brushless fan, ubomi obude kunye nobunzima bokukhanya.
5.Uyilo lwempompo yobushushu, xa kuthelekiswa notshintsho oluqhelekileyo, lunokuqonda ukufudumeza impompo yobushushu kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Ulawulo lwebhasi ye-6.CAN, indawo yokugcina indawo kunye nemvelaphi yokwandiswa kwetekhnoloji yenethiwekhi yebhasi.
7. Ubutyebi bobuchwephesha bokukhetha
7.1. Umsebenzi "wolawulo lwamafu", ukuqonda ulawulo olukude kunye noxilongo, kunye nokuphucula inkonzo kunye nokubeka esweni amandla kusetyenziswa idatha enkulu.
7.2. Unxibelelwano lwe-high-voltage uqhagamshelo lwetekhnoloji engasebenziyo
7.3. Umsebenzi ohlanganisiweyo wolawulo lobushushu bebhetri, ngokweemfuno zabathengi ngaphandle kokuchaphazela isiphumo sokupholisa isithuthi.
7.4. DC750V ombane aphezulu
Egqithileyo IsiKhombi soMbane soMbane ngebhasi yoMbane kunye noMqeqeshi, ukuBuya kweMoya ephindwe kabini
Okulandelayo: Inkqubo yoLawulo lweBhetter Thermal yeBhasi yoMbane, kunye noMqeqeshi
Umatshini wokufaka umoya wombane kwibhasi encinci ...